Barnaamijyada Caawimaada Siyaadadda ah ee Qaybta D (Part D) ee Kaarka Medicare | LawHelp Minnesota
Barnaamijyada Caawimaada Siyaadadda ah ee Qaybta D (Part D) ee Kaarka Medicare
Medicare Part D Extra Help Program (PDF)267 KB
Hadii aad ku jiro kaarka Medicare uuna dakhligaagu hooseeyo, waxa aad codsan kartaa barnaamijka Caawimaadka Siyaadadda ah ee Qaybta D (Qaybta D) ee Kaarka Medicare. Waxaa dhici karta inaad hesho caawimaad ah bixinta qaar ka mid ah kharashaadka dawooyinkaaga laguu soo qoro.
Waa maxay Barnaamijka Caawimaada Siyaadadda ahi?
Caawimaada Siyaadadda ahi waa magaca Barnaamijka Medicare ee kaa caawin kara adiga inaad bixiso dhamaan ama lacagta sannad walba aad jeebkaaga ka bixinayso, iyo dhimida lacagta kaaga soo aadi kharashka dawada laguu soo qoro. Waxaa kaloo loogu yeeraa caawimaadan Kaabida Medicare ka ee Dadka Danyarta.
Waa aad heli kartaa kabid buuxda, taa oo bixisa kharashkaaga intiisa badan. Kabida qaybta ahi waxa ay bixisaa qaarka mid ah kharashkaaga. Kabidahaasi waxa ay ku salaysan yihiin dakhligaaga iyo hantidaada.
Waa maxay habraacyada xaq ugu yeeladka dakhligu?
Waxaa dhici karta inaad xaq u yeelato Barnaamijka Caawimaada Siyaadadda ah oo Buuxa hadii dakhliga sannadkii ku soo gala iyo hantidaadu ay ka hooseeyaan heerarkaas:
Qof Kaligi ah: Dakhli ka yar $19,140 iyo hanti ka yar $14,790
Qof ay isqabaan xillo ay wada nool yihiin oo aan lahayn cid uu mas’uul ka yahay: Dakhli ka yar $25,860 iyo hanti ka yar $29,520
Hadii aad ka hooseeyo xadka kaliya uun mid ka mid ah arrimaha (dakhliga iyo hantida), ma aad heli kartid caawimaad buuxda, laakiin waxaa dhici karta inaad hesho wuxuun caawimaad ah. Kolkaa waa inaad iska codsataa.
Waxyaabaha aadan loo xisaabin hanti ahaanta waxaa ku jira guriga, gaariga, alaabta qoysku haysto, dhulka la isku duugo, lacagta gaarka meel loogu dhigo kharashaadka duugida oo gaaraysa ilaa $1,500 qofkiiba, ama lacagta cayminta nafta.
Habraacyada hantida iyo khayraadku waa ay isbedelaan sannad walba. Lamabarada dakhliga ee warqadan xoga aruursan ah waxaa iska leh sanadka 2020. Lambaro cusubi waxa ay soo bixi doonaan gu’ga 2021 ka. Meesha ugu fiican ee laga heli karo habraacyadii cusubi waa shabakada ah www.medicare.gov ama www.ssa.gov/medicare/prescriptionhelp/.
Ama waxaad wici kartaa khadka 1-800-MEDICARE.
Maxay bixisaa Caawimaada Siyaadadda ah?
Ogow: ka jaritaanadu waa cadadka ay khasabka tahay inaad adigu jeebkaaga aad ka bixiso ka hor inta uusan Medicare Qaybta D (Part D) bilaabin caawinta bixinta kharashka dawooyinka la soo qoro.
Hadii aad hesho Kabid Buuxda
Caawimaada Siyaadadda ahi waxa ay bixisaa lacagta bil walba la bixiyo (qorshaha lacagta ah ee bil walba la bixiyaa waa khasab inuu ka yaraado lacagta laga “cabir” qaato kolka la bixinayo lacagaha bil walba ah oo noqon doonta $37.96 bishii 2021)
Aadan lahayn wax lacag ah oo aad jeebkaaga ka bixinayso
Lacata dawada la soo qoro ee aad jeebkaaga ka bixinaysaa aysan ka badnayn $3.70 dawo walba oo aan asal ahayn ama $9.20 dawooyinka asalka ah.
Aysan jirin wax aan la bixin
Hadii aad hesho Kabid Qaybta ah
Kaliya waxa aad bixin lacagta bil walba la bixiyo iyadoo dakhliga ku salaysan
Lacagta aad jeebkaaga ka bixinaysaa kama ay badnaanayso $89.00
Lacagta kugu soo aadaysaa waa 15% ilaa inta kharashka dawadu uu wadar ahaan gaarayo $6,350, kolkaa lacagta kugu soo aadaysa waxa ay u dhaxayn $3.60 (dawada aan asalka ahayn) ilaa iyo $8.95 (dawada asalka ah) ama 5% ee kharashka dawada, hadba labada kii badan.
Ciddee ayaa heli karta Caawimaada Siyaadada ah?
Dadka qaarkii durbadiiba waxa ay helaan Caawimaada Siyaadadda ah. Hadii aad ku jirto kaarka Medicare Qaybta D (Part D) hadda aadna ka mid tahay mid ka mid ah kooxaha soo socda, waxay ahayd jaa inaad ka qornaato barnaamijka Caawimaada Siyaadadda ah:
Labo qaybood xaq u yeeladka. Taa macanheedu waa waxa aad heli Medicare Qaybta A (Part A) iyo/ama Qaybta B (Part B) iyo sidoo kale waxaad heli wuxuun Gargaar Caafimaadka ah (Medical Assistance).
Qorshaha Barnaamijka Lacag Meel u Dhigida Medicare (QMB, SLMB, QI)
Hadii aad ku jiro 1 ka mid ah kooxahaa AADNA helin Caawimaada Siyaadadda ah, la xiriir Maamulka Sooshal Sakuuratiga (Social Security), degdegna u codso.
Waxaad kaloo heli kartaa Caawimaada Siyaadadda ah hadii aad hadda ku jirto kaarka Medicare Qaybta D (Part D) aadna ka soo baxdo xeerarka xaq ugu yeeladka ee dakhliga.
Siddee u codsadaa Caawimaada Siyaadadda ah?
Waxa aad codsan kartaa Caawimaada Siyaadadda ah markii aad rabto. Ka codso Maamulka Sooshal Sakuuratiga (Social Security) ama xafiiska Gobolka ee (Medicaid) ka.
Waxa aad ku codsan kartaa telefanka ama waxaa laguu soo diri karaa codsi adiga.
Ka codso khadka (online) ka, oo gal: ssa.gov/extrahelp/